Banaanbax Looga Cabanayo Isbaarooyin Oo Ka Dhacay Gaalkacyo | Radio Muqdisho	Saturday, May 25th, 2013	Bogga Hore
Banaanbax Looga Cabanayo Isbaarooyin Oo Ka Dhacay Gaalkacyo
Published on October 19, 2012 by Jayte · 2 Comments · 1,129 views
Banaanbax ay dadweynaha ku dhaqan gobolka Mudug kaga cabanayaan Isbaarooyin ayaa ka dhacay Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Banaanbaxan oo dhacay kadib salaadii jimce ee maanta ayaa dadweynaha banaanbaxa sameynayey waxey ka cabanayaan isbaarooyinka yaala wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Gelinsoor ayadoo isbaarooyinkaasina ay saameyn ku yeesheen wadada iney gaadiidku toos u isticmaalaan.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka uga soo warama gobolka Mudug ayaa soo sheegaya in dadweynaha banaanbaxa dhigayey ay si gaar ah u codsanayeen in gaadiid boqolaal gaaraya oo ku xaniban magaalada Gaalkacyo loo ogolaado gargaar ay sidaan iney gaarsiiyaan dadka ku nool dhulka miyiga ah.
Mudo todobaad ku dhow ayey xerantahay wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Gelinsoor ayadoo xernaanshaha wadadaasi ay sabab u tahay isbaarooyin ay kooxo Maleeshiyaad ah soo dhigteen wadada kuwaasi oo lacago ku doonaya mana jirto ilaa hada wax talaabo ah oo uu arintaasi ka qabtay maamulka Galmudug oo wadadaasi gacanta ku haya.
abdihafiit says:	October 19, 2012 at 4:30 pm	Asc……maamul iyo waxgarad saad udhantihiinba u guntada inaad umadda ka qabataan damiirlaawashaaha bahaloobay ee jidka u galay ganacsigii iyo wixii yaree masaakiinta loogu talagalay! Sideebay ku dhici kartaa in ay 2ba usbuuc u xirantahay wadadii jirri aad ina hebel iyo ina hebel u garanaysaan? Adinkaa qaswadayaal noqonaya hadaa talaabi qaadiwaysaan. Soo qab-qabtay waa ilmahaad shasheene hadaad daacad tihiin! Kulba anigu kama aqrisanaya waa lasoo qabanwaayay!! Ilaahow umadda ka qabo kuwa dhibaya..aamiin
Reply »	Abu.yaxye says:	October 19, 2012 at 11:57 pm	Asc war walalayaal kaqabta isbarolayda dadki dhamaysay war waqtigi isbarada walaga gudbay waxaan ubaxnay waa cusub iyo isbedel somaliyay mamulka galmudug inkasto usan wax uqaban umada udhiibatay xilka hadana waaba kadartay ninka hada sheganay madaxwaynaha qaybdiid, waa uga daray gobolada dhexe waxaan leyahay dowlada somalia haso dhex gasho arimahaan qabta daran waad mahad santahiin